🥇 ▷ horumarinta jawiga dalabka ee Galaxy Fold - Samsung Newsroom Latin America ✅
horumarinta jawiga dalabka ee Galaxy Fold – Samsung Newsroom Latin America
Daawada loo yaqaan ‘Galaxy Fold’ Waxay u timid inay qeexdo nooc cusub oo aalado ah waxaana loogu talagalay inay dhiirrigeliso isla markaana sii dejiso khibradaha cusub ee mobilada. Laakiin maahan kaliya qalabka hal-abuurka ah ee ka dhigaya qalabkan kacaan. Sidoo kale waa software-ka cilad-la’aanta ah. Iyo sidoo kale isku-darka is-dhexgalka macmiil ee dareenka leh ee xoojinaya sii wadida iyo jawiga bey’ada ee sii kordhaya ee codsiyada ka faa’iideysanaya labada shay ee ‘Flash Fold’ si ay u bixiyaan waayo-aragnimada laabashada saxda ah ee macaamiisha ay sugayaan.
Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan barnaamijka loo yaqaan ‘Galaxy Fold’ iyo sida ay u aasaasayso gabi ahaanba khibrad adeegsi cusub, Samsung Press Room waxay la hadashay Jisun Park, Madaxweyne kuxigeenka Kooxda Istaraatiijiyadda Istaraatiijiyadda iyo Horumarineed, iyo Sally Jeong, Madaxweyne kuxigeenka Kooxda Cilmibaarista iyo Horumarinta Qaab dhismeedka qaybta Qaybta Mobilada ee ka socota Samsung Elektronikada.
(Bidix) bidix Jisun Park, gudoomiye kuxigeenka kooxda cilmi baarista istiraatiijiyadda iyo hormarinta istiraatiijiyadda Samsung, iyo Sally Jeong, gudoomiye kuxigeenka kooxda baaritaanka iyo hormarinta elektiroonigga Samsung.
Ka sii weyn ayaa sii fiican
Feejignaanta ballaadhan ee cabirkeedu yahay 7.3 inji Infinity Flex ee ‘Flash Fold’ ‘Waxay caddayn u tahay hadalkii hore’ in kan ka sii fiican uu ka wanaagsan yahay. ‘
Sida Jeong sharxay, mid ka mid ah guulaha ugu waaweyn ee kooxda horumarinta Galaxy Xilliga la tijaabinayo aaladda waxay ahayd isbadal uu aaladaha laabma ku abuuri karaan qibrada mobilada.
“Kahor horumarinta Galaxy Fold, waxaan lahaa taleefan gacmeed casriga ah iyo kan kiniiniga ah, laakiin isku darka labada ayaa abuuray khibrad cusub,” ayuu yidhi Jeong. “Shaashadda weyn waxay gabi ahaanba beddeshay waxyaabo ay ka mid yihiin daawashada filimada, hubinta iimaylka iyo la qabsashada wararka, illaa heer aan hadda dareemin ku qanacsanahay shaashad yar.”
Park ayaa sidoo kale xustay khibradda ay u leedahay isticmaalida ‘Galaxy Fold’ waxayna faallo ka bixisay inaysan ahayn oo keliya joogitaanka shaashadda weyn ee ka dhigaysa qalabka cusub mid gaar ah, laakiin dariiqooyinka loogu wanaajiyay iyadoo la eegayo qaabkeeda iyo baaxaddeeda.
“Qalabka ‘Galaxy Fold’, kaliya maahan in shaashadda uu weyn yahay, laakiin aaladda waxaa loogu wanaajiyay in lagu isticmaalo labada gacmood. Tusaale waxaa ah in shaqada keyboard kala goysku ay u oggolaaneyso isticmaaleha inuu si raaxo leh ugu qoro marka uu haysto qalabka ballaaran labada. Marka lagu daro, batoonka kamaradku wuxuu isu beddelaa booska si tartiib tartiib ah markii taleefanka laga soo qaado sawirka muuqaalka muuqaalka, iyo furaha guriga ayaa lagu hagaajin karaa labada dhinac ee shaashadda si uusan isticmaaleyaashu ugu khasbi karin inuu gacantiisa ku celiyo si uu u gaaro. .
Iyada oo si rasmi ah looga bilaabay Galaxy Fold Bishii Sebtember 6 ee Kuuriya, adeegsadayaashu hadda waxay la kulmi karaan gacantii ugu horreysay ee ka dhigaya aaladda mid kacaan.
Marka aad soo bandhigto shaashadda Infinity Flex ee Galaxy Fold Dunida fursadaha adduunka ayaa laga furi karaa marka loo eego multitasking. Tani waxay suurtogal ku tahay mahadcelinta hal-abuurka sida sii wadista barnaamijyada iyo daaqada Multi-firfircoon, taas oo u oggolaaneysa dadka isticmaala inay si buuxda uga faa’iideystaan ​​isku-duwnaanta ‘Galaxy Fold’.
Sida laga soo xigtay Park, muhiimadda Samsung ee marxaladaha hore ee horumarinta Galaxy Fold waxay ahayd in adeegsadayaashu ay bilaabi karaan oo ay wada isticmaali karaan ilaa seddex dalab isku mar. Daaqada Multi-firfircoon ayaa u oggolaaneysa dadka isticmaala inay ku qaataan adeeggooda badan, madaddaalada iyo isticmaalkooda waxyaabaha ku jira heerka xiga.
Tusaale ahaan, markaad ciyaareyso, Daaqada Multi-firfircoon wuxuu u oggolaanayaa dadka isticmaala inay bilaabaan dalab sida YouTube oo ay si isku mid ah u daawadaan fiidiyowyada ciyaarta. Waxay kaloo fududeyneysaa isku dheelitirka howlaha kaladuwan, sida dirista farriimaha saaxiibbada, websaydhka iyo daawashada farriimaha.
Aragti geesinimo leh
Qalabka loo yaqaan ‘Galaxy Fold’ Waa qalab geesinimo leh oo leh aragti geesinimo leh ee mustaqbalka casriga. Waa himilo ka bilaabata qalabka iyo codsiyada si kor loogu qaado isticmaalka waxyaabaha ka sii darnaa, u oggolaanaya in la helo adeegsi fara badan isla markaana albaab u furma dadka isticmaala si ay ugu raaxeystaan ​​khibradaha cusub ee mobilada.
Si looga caawiyo xaqiijinta aragtidaas, soo-saareyaasha Samsung waxay si dhow ula shaqeynayeen Google iyo la-hawlgalayaasha kale ee muhiimka ah si ay u kobciyaan cilmiga deegaanka ee Galaxy Fold iyada oo la adeegsanayo codsiyada iyo adeegyada caanka ah maanta. Dadaalkooduna way istaahileen. Kooxda horumarintu waxay wanaajiyeen boqolaal dalabyo ah oo loo adeegsado barnaamijka loo yaqaan ‘Galaxy Fold’, oo ay ku jiraan codsiyo caan ah sida YouTube, Facebook iyo Microsoft Office.
Labada Jeong iyo Park waxay ku tilmaameen iskaashiga Samsung uu la leeyahay Google inuu yahay furaha aasaasida dareere iyo hanaan ku habboon barnaamijyada kobcinta ee loo yaqaan ‘Galaxy Fold’. Jeong ayaa yidhi, “Waxaannu samaynay koox iskaashi oo iskaashi ah bilowga hanaanka horumarka, ilaa iyo markaasna waxaan dhisaynaynay deegaanka dabiiciga ah.”
Waxay tilmaameen sii wadida ilaha barnaamijyada ee loo yaqaan ‘Galaxy Fold’ oo tusaale cad u ah iskaashigan. Horumarinta shaqadan, oo u oggolaaneysa codsiyada in ay sameeyaan kala-guur qumman oo u dhexeeya shaashadda daboolka iyo shaashadda ugu weyn marka isticmaaleyaashu furaan oo xirmaan aaladda, waxay dalbadeen in soo-saareyaasha Samsung gabi ahaanba dib uga fiirsadaan howlaha caadiga ah ee dalabka. Caqabadda waxay ahayd xaqiiqda ah in Galaxy Fold Ma aha oo keliya inuu leeyahay laba shaashad, laakiin saamiyada labada waa mid aad u kala duwan. Intaa waxaa sii dheer, horumariyeyaashu waxay u baahnaayeen inay abuuraan kala-guur qumman, si uu adeegsaduhu u furo aaladooda iyo arjiga ay isticmaalayaan shaashadda hore ayna ugu fiicnaadeen shaashadda weyn, iyaga oo aan joogsan ama dib u bilaabin. Nasiib wanaag, kooxda horumarinta ayaa ka adkaatay caqabaddii.
Caqabad kale oo soo food saartay kooxdu waxay ka kacday hab dhaqameedka Android si loo maareeyo codsiyada badan. Sida Park sharxay, “oo leh ‘Android’ heer ‘ah, mar laba codsiyo ah ayaa la hawl galaa, mid ka mid ah lama huraan inuu istaago.” Si loo xalliyo dhibaatadan, Jeong wuxuu raaciyay, kooxdu waxay iskaashi la sameeyeen Google si ay u dhisaan nidaam daaqado badan oo cusub kaas oo loogu wanaajiyay shaashadda ugu weyn ee Galaxy Fold.
Caawi kuwa wax dhisa
Iyada oo ay ka kooban tahay qayb kasta oo ka mid ah kombiyuutarka isku laabmaalaha ee galalka Galaxy Beddalka, Samsung iyo Google waxay bilaabeen inay horumariyaan qaab dhismeedka lagama maarmaanka u ah soo-saareyaasha si ay u tijaabiyaan ugana horumariyaan codsiyadooda qalabkan cusub.
Imtixaanno tijaabo ah ayaa laga aasaasay Kuuriya, Mareykanka iyo Shiinaha si ay u siiyaan horumariyeyaasha Android fursad ay ku bartaan isku-dheelitirka aaladda kumbuyuutarka ee isticmaalaha isla markaana la cusbooneysiyo codsiyadooda. Si loo furo albaabka horumariyayaal badan si ay u abuuraan xaaladdan jahawareerka duminaysa, Samsung waxay soo saartay taxane ah ilaha tooska ah ee laga heli karo internetka, oo ay ku jiraan ‘sheybaarka tijaabada fog’ oo la jaan qaada Google, waxayna u oggolaaneysaa soosaarayaasha inay tijaabiyaan oo ay ku socodsiiyaan codsiyada kombuyutarkaaga iyagoo adeegsanaya. aalad kambiyuutar ah oo loo yaqaan ‘Galaxy Fold’ iyo moodle.
Si wada jir ah, agabyadan ayaa u siiya horumariyeyaasha aaladaha ay u baahan yihiin si ay u horumariyaan codsiyadooda ku saabsan interface mustaqbalka. Iyo sida uu qabo Park, horumariyayaal badan ayaa durbaba ku soo biiray.
“Saaxiibadeena iyo horumarinteenuba waxay muujiyeen xiise weyn oo loo qabo samaynta codsiyada qaabka cusub,” ayuu yidhi Park. “Waxaan qorsheyneynaa inaan balaariyo shaybaaradayada tijaabada si dhaqsiyo ah inaan u abuurno fursado badan soosaarayaasha si ay ugu kobciyaan cilmiga deegaanka” Galaxy Fold “oo leh dalabyo firfircoon”.
Mustaqbalka isku laab laab
Dhowr ka mid ah hal-abuurnimadii la abuuray intii lagu jiray geeddi-socodka horumarka, oo ay ku jiraan Codsiga Sii-wadidda iyo daaqadda Dhaqdhaqaaqa badan, ayaa kaliya kadhigin waayo-aragnimada isticmaale ee ‘Galaxy Fold’ inay noqdaan kuwo dheecaan leh oo dareen leh, laakiin sidoo kale waxay dejiyeen halbeeg loogu talagalay isku-laabashada taleefannada.
Iyada oo ay ugu wacan tahay wada shaqeynta dhow ee Samsung ay la leedahay Google, oo ah nooca ugu dambeeyay ee Android (Android 10), labada hal-abuurnimo ee aan kor ku soo xusnay waxaa lagu dari doonaa sidii ilaha caadiga ah ee taleefanka isku laabma. “Markii la hirgaliyo Android 10 oo uu noqdo heerka cusub ee aaladaha Android,” Jeong ayaa sharraxay, “waxay ka dhigi doontaa horumariyayaal badan inay xisaabta ku darsadaan isticmaaleyaasha taleefanka isku laabma marka la samaynayo codsiyada.”
Iskaashiga joogtada ah ee Google iyo hogaamiyaha kobcinta codsigu waxay ka caawin doonaan Samsung inay kobciso nidaamka deegaanka ‘Galaxy Fold’ oo leh adeegyo xitaa firfircoon oo waliba ka sii fiicnaan doona shabakadda 5G ee ugu dambeysay.
“Isku-darka shaashadda weyn ee Galaxy Fold iyo xawaaraha degdega ah ee 5G waxay beddeli doonaan habka aan u isticmaalno dalabyada maalinlaha ah uguna raaxaystaan ​​waxyaabo kaladuwan,” ayuu yidhi Park. “Taasi waxay sidoo kale kujirtaa adeegyo sida ‘4K streaming, taas oo macnaheedu yahay in, tusaale ahaan, adeegsadayaashu si raaxo leh u daawan karaan durdurro fiidiyoowyo badan isla waqti isku mid ah oo ku yaal shaashadda ballaaran ee galalka Galaxy Fold”
Jeong wuxuu farta ku fiiqay in howsha horumarineed ee tayaynta codsiyada ay si dhakhso ah u dhacayaan. Wuxuu faallo ka bixinayaa in “casriyeynta deg-degga ah” ay dedejineyso awoodda shirkadda si ay u siiso khibrad isku laabmaal ah oo dhameystiran dadka isticmaala.
Haddii arji aan wali loo habeynin Galaxy Fold, teknolojiyada kor u qaadista codsiga ee lagu dhisay taleefanka casriga waxay gacan ka geysan doontaa in la hubiyo in waxa ku jira lagu soo bandhigo qaab si buuxda uga faa’ideysanaya shaashadda weyn iyo qaabka laalaaban karo ee qalabka. “Taabashada taabashada badhanka, qalabku wuxuu si otomaatig ah u rogayaa cabirka iyo cabirka dalabka si uu ugu haboonaado shaashadda, si aysan isticmaaleyaasha ula kulmin wax raaxo ah.”
Sida Park tilmaamay, iyada oo loo marayo barnaamijyada kor u qaadista, tijaabinta aasaasiga ah iyo abuuritaanka iskaashi xiiso leh, Samsung ayaa “aasaaska u dhigaysa deegaanka dabiiciga ah ee jajaban iyo kala duwanaanshaha, oo leh Galaxy Fold” hogaamiyaha qaybta “.
“Hadafkeenna ugu dambeysa ayaa ah inaan ku dhiirrigelinno isticmaaleyaasha khibrad cusub oo guur-guura,” ayuu raaciyay Jeong. Mustaqbalka, waxaan sii wadi doonnaa inaan taageerno horumarinta codsiyada ka faa’ideysanaya UX isku laabma qaabab aan caadi aheyn oo aan geyn doono gebi ahaanba khibradaha cusub ee deegaanka dabiiciga ah. “